I-Wagait Beach Bush Retreat
Itholakala ekugcineni kwe-cul-de-sac ethule, le ndlu ibekwe phakathi kwehlathi lemvelo nezingadi zasezindaweni ezishisayo. Uzobona inala yezilwane zezinyoni, ama-wallabies amaningi nezinye izilwane zasendle eziningi.
Lesi sakhiwo siklanywe ngokwezakhiwo ukuze sisize isimo sezulu esimangalisayo esishisayo, indlela yokuphila elula kanye nokubukwa kwehlathi lemvelo.
Amakamelo okulala anomoya opholile futhi indawo yokuhlala ishisayo futhi inomoya opholile.
Indawo yokubhukuda eyimfihlo inikeza indawo ekahle yokupholisa nokuvuselela.
I-Wagait Beach iwumphakathi wasemaphandleni ongenakonakala, othule futhi onobungani - cishe i-pop. 400. Itholakala ogwini olusenyakatho ye-Cox Peninsula eduze kwase-Mandorah, isibhakabhaka sase-Darwin sibonakala ngokucacile ngaphesheya kwe-Darwin Harbour.
I-Wagait Beach iyindawo ethandwayo yokudoba olwandle olujulile. Kukhona ukudoba okumangalisayo osuka esikhumulweni semikhumbi nasemabhishi noma uvule isikebhe sakho usuka kumpambuko wezikebhe waseMandorah noma we-Bynoe Harbour uma ukhetha ukudoba itheku, izintuba kanye nemifudlana emanzi.
Ukudoba, ukubukela izinyoni, ukuhlola izinsalela ze-WW2, ukukama ogwini noma ukuphumula okuvamile ngezinye zemisebenzi ongayithola e-Wagait Beach. Snuza ku-hammock, bukela ilanga lishona kusukela emphemeni obheke echibini nasehlathini noma uzipholise echibini ngesibambo esibandayo ngaphambi kokukhanyisa i-BBQ ukuze upheke ukudla okudlayo kosuku. Isitolo sendawo siseduze kulabo abancamela omunye umuntu ukuba abaphekele!
Thatha ukushayela futhi uhlole. Bona izindunduma zomuhlwa kazibuthe, amaxhaphozi agcwele izilwane zezinyoni kanye nesiphethu semvelo esifihlwe ephaketheni elincane lehlathi lemvula. Ungabona ibhuloho lasendle noma amabili. Hlola inqwaba yamathrekhi asehlathini aholela emabhishi angonakalisiwe kanye nokudoba okuhle.
Kubadlali be-WW2 bavakashela izinsalela ze-‘Milady’, ibhomu le-US Liberator eliphahlazekile, izinsalela zekhebula elingaphansi kwamanzi e-West Point kanye nezinsalela zezibhamu eziningi ze-WW2 ezihlakazeke ogwini.
Isitolo sendawo sigcina yonke into oyoyidinga ngesikhathi sokuhlala kwakho okuhlanganisa igrosa, utshwala, uphethiloli, igesi, iqhwa, isiyengo, izinto zokudoba, ikhofi le-expresso, ukudla okwehla esiphundu futhi kunamaphephandaba nesinkwa esisha esilethwa nsuku zonke.